Date My Pet » Inona no vehivavy Te amin'ny Fifandraisana?
Inona no vehivavy Te amin'ny Fifandraisana?
Last nohavaozina: Oct. 22 2020 | 2 min namaky
Araka ny fianarana natao tamin'ny 2012, 41% fanambadiana voalohany, 60% faharoa fanambadiana sy 73% fahatelo ny fanambadiana any Etazonia hiafara amin'ny fisarahana. Ireo no tena manaitra isa ary fa ny lehilahy sy ny vehivavy any Etazonia miady mafy amin'ny tena manana fifandraisana mafy orina. Fa ny fifandraisan'izy ireo ho mafy, izy roa mihitsy dia tsy maintsy mahatakatra ny zavatra ilain'ny tsirairay tonga lafatra. Izany, eto zavatra vitsivitsy ny vehivavy mitady amin'ny fifandraisana.
Ny fitiavana: Mety hieritreritra ny iray tsy tokony ho ny vehivavy mba hitady fitiavana, fa tsy afaka handroso tsy lazaina intsony “fitiavana” toy ny vehivavy tia fotsiny ny mahatsapa tena ho tiana. Tsy midika fa ny vehivavy maniry ny lehilahy amin 'ny fiainany mba ho fanehoana ny fitiavana-bahoaka amin'ny intervals tapaka, fa tiany fotsiny izy mba mampiseho ny fitiavany azy tsimoramora amin'ny alalan'ny asa sy ny teny araka matetika araka izay azo atao; indraindray imasom-bahoaka ny fitiavana dia tsy ratsy na. Izany, raha toa ianao ka olona, hihazona mafy fatorana amin'ny vehivavy tianao tsy maintsy foana fampahatsiahivana azy hatraiza ny fitiavanao azy amin'ny alalan'ny teny sy ny fihetsika.
Security: Ny dia ny fiainana dia tsy mora ho an'ny olona, irrespective ny lahy sy ny vavy, fa ho an'ny vehivavy ny dia matetika dia henjana. Matetika dia miatrika olana fiarovana hafa saika nandritra ny fiainany, anjara lehibe izay misy ifandraisany ny firaisana.
Ho an'ny vehivavy any Etazonia, herisetra ara-nofo dia tsy zavatra tsy mahazatra. A firenena naneho an-telefaonina fanadihadiana mahakasika 612 vehivavy olon-dehibe natao tamin'ny volana Jiona, 2000 Hita tamin'izany fa saika rehetra ireo no niatrika herisetra eny an-dalana amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainana. Around 87% ny vehivavy Amerikana taona eo 18 ary 64 taona no hita ho manana ny traikefa misy mampijaly ny lehilahy iray vahiny.
Izany avo hatao mety ho herisetra mamela ny vehivavy tena nisy vidiny. Izany, tiany izy ireo ny mpiara-miasa afaka matoky tanteraka. Vehivavy mitady ny mpiara-miasa, izay no hilalao ny andraikitry ny fiarovana tonga lafatra sy hahatonga azy ireo ho nahatsiaro ho voaro.
Amin'ny maha-olona raha hahomby eo amin'ny fanaovana ny vadinao tsy hanana ahiahy, Tsy ho ela dia hahita ny fanokafana miakatra ho any aminareo sy pihetseham-po na ara-nofo. Izany dia tonga dia manao ny fatorana eo amin'ny roa aminareo dia mahery.
Vazivazy: Tia mampihomehy dia tena zava-dehibe ho an'ny vehivavy. Vehivavy mitady lehilahy foana tamin'ny kely tia vazivazy izany hoe. ny olona izay afaka manao azy ireo hihomehy. Araka ny fanadihadiana ataon'ny MarketTools Inc, 58% ny mpiara-miombon'antoka ny vehivavy te hanana tia vazivazy. Izany, ny olona mizaha ny fomba hahatonga ny vadiny sambatra sy afa-po dia tokony hiezaka ny ho tsara indrindra amin'ny ny wittiest.
Fanajana: Na dia maro aza ny manamarika izany farany, fanajana dia azo inoana rehetra ny zava-dehibe indrindra ao fifandraisana ho an'ny ankamaroan'ny vehivavy Amerikana. Ny fanadihadiana avy MarketTools Inc nanambara fa 84% ny vehivavy mihevitra fa ny fifandraisana mba ho fahombiazana, fahazoana fanajana avy amin'ny mpiara-miasa no tena zava-dehibe.
Tsy maintsy hanontany tena “Ahoana ny endrika ara-batana”? Eny, ny vehivavy tia ny vadiny sy ny mpiara-miasa manana izay manintona, fa ho azy ireo dia tsy iray amin'ireo toetra voalohany mba hitady olona ao amin'ny.
12 Tips Fa mahomby Singles
Efatra karazana Men Women Go Fa
Inona no mahasarika ny vehivavy ny ny Dreams